Le mpahla elinganiselwa ku-800 Square Feet nakanjani ishibhile, ngakho-ke sicela ucabangele ukuyibhalisela ngokushesha. Uma ufuna indawo enentengo kuma-Rs 22,000, usendaweni efanele. IFlat obukade ulifuna ukuyithenga iminyaka iyatholakala ngokuqasha kanti njengamanje intengo yalo iyabiza kakhulu. Uma ufuna izinketho zesikhathi eside, le ndawo iyona engcono kunazo zonke ongayiqasha! IBahria Town Rawalpindi yisivumelwano okufanele usibheke. IBahria Town Phase 7 ihlala ishintsha futhi kuvela amathuba amasha kubahlali nsuku zonke. Ezinye izici ezibalulekile zalesi sakhiwo zichazwe lapha. Hlala uthokomele ekhaya lakho ngenxa yohlelo lokushisa oluphakathi nendawo. Uhlelo lomphakathi lokulahla imfucuza luqinisekisa inhlanzeko ngaso sonke isikhathi. Lesi sakhiwo sifaka indawo yokwamukela izivakashi eyenziwe kahle. Inkimbinkimbi iza ifakwe umoya ophakathi nendawo wokuqinisekisa isipiliyoni esihle. Uma ufuna imininingwane ethe xaxa ngalokhu kunikezwa, sicela usithinte.